Al-Shabab oo jabhad kale taageero ka helay & Liyu boolis oo dalka soo galay |
Al-Shabab oo jabhad kale taageero ka helay & Liyu boolis oo dalka soo galay
acquire neurontin, acquire dapoxetine. Muqdisho(SomaliMedia) – Maamulka Gobolka Bakool ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixiyay dagaalo xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkaasi, kaasi oo la sheegay inuu ka xooganaa dagaaladii ka horeeyay.
Maxamed Cabdi Tool, gudoomiyaha gobolka Bakool oo la hadlay VOA ayaa sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid u dhaxeeyay ONLF iyo Al-Shabaab oo isku dhinac ah ciidamada dowlada oo taageero ka helaya labo dhinac.
Gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in ciidamada la magac baxay Liyuu boolis ee suga amaanka dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ay kusoo biireen dagaalada ka dhacaya gobolka Bakool ayna taageerayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya.
Wuxuu sheegay in arintaasi ay ka dambeysay kadib markii ciidamada Alshabaab ay taageero ka heleen ciidamada Jabhada ONLF oo uu sheegay gudoomiyaha inay ku qasbanaadeen inay is weheshadaan Alshabaab maadaama ciidamada Alshabaab ay ku sugan yihiin deegaanada ay ka gudbi lahaayeen ciidamada ONLF ee doonaya inay galaan dhulka Soomaalida Ethiopia.
Gudoomiye Maxamed Cabdi Tool ayaa sheegay in dagaalada xoogooda ay ka dhaceen inta u dhaxeysa deegaanada Garasweyne iyo Rabdhuure ee gobolka Bakool, uuna jiro qasaaro xoogan laakiin dib ay faahfaahin ka bixin doonaan.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay ciidamada ONLF oo ku aadan inay taageereen ciidamada Alshabaab ee ka dagaalamaya gobolka Bakool.